SPAM sy ny indostrian'ny hafatra an-tsoratra | Martech Zone
SPAM sy ny indostrian'ny fandefasana hafatra
Alahady, Aogositra 7, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Adam Small
Ireo orinasa dia nanamora ny fiheverana ny fiantraikan'ny fandefasan-kafatra an-tsoratra amin'ny finday. Ny fandefasan-kafatra an-tsoratra, raha tsy fantatra amin'ny anarana hoe SMS (Rafitra Hafatra fohy) dia napetraka tao anaty alokaloka noho ireo rindranasa finday malaza kokoa. Na izany aza, tsy ny finday rehetra dia finday avo lenta finday ary afaka mampiasa fampiharana. Ny telefaona finday rehetra dia mamela ny fandefasan-kafatra an-tsoratra.
Rehefa miverina amin'ity medium tsy mampino ity ny orinasa dia maro no tsy miraharaha ireo fahazoan-dàlana ilaina. Ny indostria dia nitaky opt-in indroa ho an'ny rosia, saingy nametraka ireo fepetra ireo ho an'ny opt-in tokana. Mirongatra be ny SPAM ary hisy ny vokany. Mpampiasa finday marobe no voasazy isaky ny lahatsoratra voaray - manokatra ny indostria ho an'ny fitoriana.
izany tatitra manasongadina olana lehibe amin'ny indostrian'ny marketing amin'ny hafatra. Miaraka amin'ny fiakaran'ny spam amin'ny hafatra an-tsoratra, dia hihena be ny fahombiazan'ny marketing amin'ny alàlan'ity fantsona ity raha tsy voamarina. Miaraka amin'ny roa ampahatelon'ny mponina amerikana mandray spam amin'ny sms, fotoana izao hanombohan'ny orinasa mahatsapa ny fiantraikan'ny spam amin'ny sms amin'ny mpanjifany sy ny fisafidianana ireo mpamatsy rindrambaiko toa an'i Tatango izay nametraka politika fandeferana aotra ho an'ny spam hafatra an-tsoratra. Derek Johnson, tale jeneraly Tatango
Tamin'ny volana jolay 2011 dia nanadihady mpanjifa 500 amerikana ny mpamatsy hafatra an-tsoratra Tatango mba hahitana ny zavatra niainany tamin'ny spam amin'ny hafatra an-tsoratra. Ny valin'ny fanadihadiana dia nampiasaina hamoronana ity sary manaraka ity amin'ny spam hafatra an-tsoratra.
68% amin'ireo namaly ny fanadihadiana dia nilaza fa nahazo spam hafatra an-tsoratra.
Ny vehivavy latsaky ny 17 taona no tena mety nahazo spam amin'ny sms miaraka amin'ny 86% ny valinteny fanadihadiana nilaza fa nahazo spam hafatra an-tsoratra.
Ny vehivavy 55+ no tsy dia mandray spam amin'ny sms raha 51% ny valinteny fanadihadiana nilaza fa nahazo spam hafatra an-tsoratra.
Ny lehilahy sy ny vehivavy dia mety ho mpandray spam amin'ny hafatra an-tsoratra.
Marketing amin'ny hafatra an-tsoratra nataon'i Tatango.
Ny tolo-kevitray dia ny hampiasa fomba fiasa mifehy indroa miditra. Izany dia mitaky ny mpampiasa hisoratra anarana amin'ny alàlan'ny tranokala na hafatra an-tsoratra, arahin'ny fanamafisana fa te hisoratra anarana izy ireo. Rehefa manangana an'ity serivisy ity ho an'ny mpanjifanay izahay Finday finday, mangataka fampahalalana vitsivitsy ihany koa izahay - toy ny kaody zip. Io dia ahafahantsika mandefa hafatra any aoriana any kaody positaly, ho an'ireo mpanjifantsika. Io dia mampihena ny isan'ny fandefasana sy mampiakatra ny tahan'ny valiny satria mifandraika amin'ny jeografia ireo hafatra.
Infografika: Ny fanaovana Qodes Codes azo antoka